सबिन र अनुको बिहे, 'कुरो र कुलो' जस्तै ⋆ Filmy Pati
सबिन र अनुको…
नायक सबिन श्रेष्ठ नायिका अनु शाहको प्रेम चर्चा सिने नगरीमा राम्रै चल्ने गर्छन । बास्तबमानै उनीहरु प्रेममा पनि रहेको सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो । पछिल्लो केहि दिन यता सबिन र अनु बीचको बिबाहको खबरले नेपाली सिनेबजार तातेको छ । समाचारहरुमा उनीहरुबीच कानुनी बिवाह भएको खबर आएको छ । खबर आइरहँदा सबिन र अनु दुवैले आफुहरु बीच कुनै पनि किसिमको बिबाह नभएको बताएका छन् । सबिन र अनु दुवैले यो समाचार आईरहदा गलत संचार भन्दै आफ्नो फेसबुक वालमा आफ्नो भनाई राखेका छन् ।
अभिनेता सबिनले लेखेका छन् ‘अमेरिका अष्ट्रेलिया पदन जान को लागि कानुनी बिहे गरेर जनी उमेर छैन हजुर मेरो । जुन दिन मैले बिहे गर्छु बाजा बजाएर गर्छु । कानुनी बिहे जिल्ला अदालत मा हुँदैन । सानो न्युज ले कसैलाई अस र पर्न सक्छ ।बाकी के भन्नु मिलाएर बुज्नु’ ।
नायिका अनु शाहले लेखिकी छिन् , ‘कहिले सम्म एस्तो झुटो न्युज पड्ने विवाह भन्ने चिज माया बिश्वास र लामो जिन्दगी काट्ने कसम खाएर जिन्दगी मा एक चोटी मात्र गरिन्छ कसैलाई देखाआउन त पक्कै गरिदैन ।
यो खालको समाचर अनि सबिन र अनुको स्टाटस आईरहदा संचार माध्यमले गलत खबर लेखेका हुन् कि सबिन र अनुले नै झुट बोलेका हुन् भन्ने कुरा अन्योल देखिएको छ । ‘कुरो र कुलो लाई जता पनि लैजान सकिन्छ’ भन्ने उखानलाई यथार्थ मान्ने हो भने हावा नचली पात हल्लिदैन भने जस्तै नभएको कुरा समाचरमा पनि किन आउथ्यो होला र ? उता सबिन र अनुको भनाइ हेर्दा बिबाह भन्ने चिज भएको भए किन लुकाउनु पर्थ्यो र ?
सरोज अहिले सम्म पनि उत्तिकै हेड्सम (रमाईलो गफ)
‘सोलीडोली’ मा कुरा मात्र , साईन गरेकै छैन : प्रदिप खड्का (भिडियो)